DEG DEG: Mid kamid ah Taliyaashii ciidamada Somaliland ee G Sanaag oo la dilay. – Puntlandtimes
YUBE(P-TIMES)- Wararka naga soo gaaraya deegaanka Yubbe ee gobalka Sanaag ayaa sheegaya in halkaas lagu dilay mid kamid ah Taliyaashii ciidamada Somaliland ee dhawaan soo gaaray deegaankaas, waxaana halkaas ka taagan xiisad u dhaxaysa labada dhinac.
Sarkaalka la dilay ayaa magaciisa lagu soo koobay G/dhexe Nayjeeri, waxaana dilkiisa fuliyey mid kamid ah ciidamada deegaankaas kusugan, kaas oo ay isna toogteen ciidamada maamulka Somaliland oo uu isku dayay in uu ka baxsado.
Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya sababaha keenay dilkan, waxaana wararka qaarkood sheegayaan in ay ku timi ka dib markii uu muran soo kala dhexgalay sarkaalka la dilay iyo askariga dilka fuliyey, ee isna ugu dambeyntii la dilay.
Talaabada ayaa abuurtay xiisad cabsi keeni karta, waxaana gudaha ciidamada laga dareemayaa in ay u kala safteen labo dhinac, iyadoo ay jiraan xubno katirsan maamulka Hargeysa oo ku sii jeeda deegaankaas si loo xaliyo dhacdadan.
Mamulka somaliland shilalka faraha badan ee mar kasta ka dhaca deganada sool & sanaag,oo dhanka cidamada uu mar kasta ku dabulayo,waxa ka dhasha khasaroyin naf & maalba leh maxa fa,edo ah oo ugu jira? Shilalka isdaba joga ah oo dhimashada dhawaca,khasaraha dhanka hantida & khasaraha nafed ee jogtada ka noqday maxa ku khasbaya?.